[ Previous Page | Current Page # 001 | Next Page ] Name( Myanmar / English ) Author Description 1. အိပ်မက်များ Myanmar Burmese Community Blog အိပ်မက်များ ကဗျာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒိုင်ယာရီတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်မက်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရေးချင်တာတွေ ရေးချင်တာတွေရေးကြဖို့ပါ
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ထဲ ရှိတာလေးတွေပေါ့
2. မောင်လှရဲ့ဒိုင်ယာရီ Mg Hla's Diary မောင်လှ - Mg Hla မောင်လှရဲ့ဒိုင်ယာရီ 3. ငွေနှင်းမြူ My Memorial Thoughts Ngwe Hnin Myu One of my exits 4. ဖိုးသား PoeThar ဖိုးသား ဖိုးသား Blog 5. ပန်းပွင့်လေး My Diary Pan Pwint Lay ပန်းပွင့်လေး - My Diary 6. ကျော်မင်းထွန်း Kyaw Min Tun ကျော်မင်းထွန်း ရေးချင်တာလေးတွေ ခံစားမိတာလေးတွေ ချရေးဖို့ပါ 7. မြတ်သူရ Myat Thura မြတ်သူရ မြတ်သူရ Blog 8. ဇော်မိုးအောင် Zaw Moe Aung ဇော်မိုးအောင် ဇော်မိုးအောင် - Personal Blog 9. မို့မို့ Moe Moe's Blog မို့မို့ မို့မို့ - Moe Moe's Blog 10. မေနှင်းဖြူ Me, Myself and Mayvelous May Hnin Phyu Mayvelous isapersonal weblog of May Hnin Phyu, an amateur web developer, including the collection of interests, ideas, thoughts, opinions and latest project news. ... 11. နိုင်းနိုင်းစနေ NineNineSaNay နိုင်းနိုင်းစနေ နိုင်းနိုင်းစနေ Blog 12. မောင်မျိုးအောင် MG Myo AUnG မောင်မျိုးအောင် personal blog, 13. တီကောင် Tekong Tekong တီကောင့် တိုလီမုတ်စများ 15. မြန်မာစာများ MM Posts MM Blogger မြန်မာစာများတွင် စာများ၊ ကဗျာများ နှင့် အလင်္ကာများ ပါဝင်ပါသည်။ အချို့မှာ ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ကောက်နှုတ်တင်ပြထားချက်များ ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့စာများမှာ ကူးယူထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများ ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ 16. ညီလင်းဆက်ရဲ့ သားရဲတွင်း Nyi Lynn Seck's 18+ DEN ညီလင်းဆက် ကျွန်တော့် သားရဲတွင်းထဲမှာ စားပြီးသား အစားအသောက် အကြွင်းအကျန်တွေ ရှိတယ်။ မစားရသေးတဲ့ အရာတွေ ရှိတယ်။ အလိုမတူဘဲ ယူငင်ထားတာတွေ ရှိတယ်။ အများသူငါ မေးငေ့ါစရာ ရနံ့ဆိုးတွေ ရှိချင်ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာဟာ ကျွန်တော် မြတ်နိုးရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများသာ။ 17. - A Place to Say Something Ko Ye Ko Ye's Blog. A Place to Say Something 18. စကားမစပ် By The Way ဝေဖြိုး စကားမစပ်ပြောချင်တာလေးတွေကိုရေးချင်လို့ပါ။ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ၊တွေ့ရကြုံရတာတွေကိုဝေမျှချင်တာလည်းပါပါတယ်။ ပုံမှန်လည်းရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပြုလိုရင်လည်း မှတ်ချက်ရေးထားခဲ့ပေါ့နော။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 19. သံစဉ်မဲ့အလင်္ကာများ - အိမ်ချမ်းမြေ့ ထူးမခြားနားပေမယ့်...
အိပ်ခက်သည့်ညများအတွက်... 20. မရှိပါ။ mm.it.lad Kryptonova မြန်မာလိုရေးတဲ့ Blog တစ်ခုပါ။ I.T သင်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်သားတစ်ယောက်က သူရေးချင်တာတွေ ရေးထာတဲ့ Blog ပၝ။ I.T ဘက်ကို နည်းနည်း ယိမ်းကောင်းယိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။ Internet ပေၞက အသုံးဝင်တာလေးတွေ Highlight လုပ်ပြထားပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 21. Ko Ainmat Blinkiss Ko Ainmat I Love Anne Suzuki 22. ရှင်မင်းရဲ့ Coffee CorNer Shinmin's CoffeeCorNer Shinmin Just what I wanna say to my dear friend.
အမိ ရဲ့ ကျုပ် ...။
ဒီနေရာလေးက အမိ နဲ့ ကျုပ် ခင်မင်မှု အမှတ်တရ ပါ အမိ။
23. လင်းလက်ကြယ်စင် Lin Let Kyal Sin လင်းလက်ကြယ်စင် အမှန်တရားဆိုတာဘာလည်း.. ရင်ဖွင့်သံနဲ့ ငါတို့အားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ကျက်ခြင်းတွေအားလုံးကို ရေးသားခြင်းပဲ….. မိမိသာမှန်နေရင် ၊ အများအတွက် အရှေ့ကရဲရဲလျှောက်ခဲ့ရင် အခုအချိန်မှာမင်းတို့ ငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရွှေနိုင်ငံက ဒီလောက်ဖြစ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး…….. ခံစားချက် ၊ ဝေဖန်ချက် ၊ အမှန်တရားတွေအားလုံး စုဝေးနေတဲ့ အွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီလေးတစ်ခုပါပဲ… 24. ကျနော်၏စာစုများ The Notebook ThetNaing ကျနော်၏စာစုများ 25. ဒီးဒုတ် DeeDoke DD ကျွန်ုပ်-ရန်ကုန်-မြန်မာ-အာရှ-ကမ္ဘာ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါ ကျွန်တော့်အကြောင်းက မပါသလောက်ဘဲ။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း သိရှိဖတ်ကြားမိတာလေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံ ဝေငှတင်ပြရုံကထက် ဘာမှမပိုပါဘူးဗျာ။
'ဒီး' 26. မျောက်၇ကောင် 7monkeys 7monkeys monkey thoughts, monkey business, monkey politics 27. ပန်းလေညှင်း PanLayNyin မြတ်ဆု ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရယ်မောစရာဓာတ်ပုံများ၊ သတင်းများ၊ စိတ်ဝင်စားစရာပစ္စည်းများ ခံစားချက်များ ကို တင်ပြထားတာပါ။ 28. Mg, Khai Blog Mg, Khai Blog Thomas Code is Poety. 36. ပုထုဇဉ်မှတ်တမ်း Log ofaLayman Puhtuzin Log ofaLayman: as the name suggests, it isablog to pour out the heart and brain ofapuhtuzin human being who happens to beaBurmese. 37. ထူးလမင်း Htoolaminn - Myanmar blogger Htoo La Minn Aung A blog with interesting cool collections and links. 39. ဂျစ်တူးဆိုသူ၏အပိုင်းအစများ Pieces of gyit tu ဂျစ်တူး တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက် အထီးကျန်ညတွေမှာ ၀င်ရောင်လာတဲ့အတွေးများအား ဂျစ်တူး၏အပိုင်းအစများအဖြစ် ဖန်တီးထားသော နေရာတခု... [ Previous Page | Current Page # 001 | Next Page ] [ Font Download | Font Layout | Font Installation ] [ Contact Us | Register | CopyRight @ | Authors | Rules ]